Ozi Ọma Mak Dere 2:1-28
Jizọs gwọrọ onye ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ (1-12)
Jizọs kpọrọ Livaị (13-17)
A jụrụ ya ajụjụ banyere ibu ọnụ (18-22)
Jizọs bụ “Onyenwe Ụbọchị Izu Ike” (23-28)
2 Ma mgbe ụbọchị ụfọdụ gachara, Jizọs banyere Kapaniọm ọzọ. A kọsakwara ebe niile na ọ nọ n’ụlọ.+ 2 Ọtụtụ ndị gbakọrọ n’ụlọ ahụ nke na ohere adịghịzi, ma n’ọnụ ụzọ. O wee malite ịgwa ha okwu Chineke.+ 3 Ndị mmadụ butekwaara ya otu onye ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ. Ọ bụ mmadụ anọ bu ya.+ 4 Ma, ha enweghị ike iburute ya n’ebe Jizọs nọ n’ihi ìgwè mmadụ ahụ. Ha wee meghee elu ụlọ ebe Jizọs nọ, si n’oghere ha gwupuru buda àkwà* onye ahụ ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ dina na ya. 5 Mgbe Jizọs hụrụ na ha nwere okwukwe,+ ọ sịrị onye ahụ ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ: “Nwa m, a gbagharala gị mmehie gị.”+ 6 Ma ụfọdụ ndị odeakwụkwọ nọ ọdụ n’ebe ahụ, ha nọ na-eche n’obi ha, sị:+ 7 “Gịnị mere nwoke a ji na-ekwu okwu otú a? Ọ na-ekwulu Chineke. Ònye ga-agbagharali mmehie ma e wepụ otu onye, ya bụ, Chineke?”+ 8 Ma ozugbo ahụ, Jizọs matara na ọ bụ ihe ahụ ka ha na-eche ma na-ekwurịta. O wee sị ha: “Gịnị mere unu ji na-eche ihe ndị a n’obi unu?+ 9 Olee nke ka mfe? Ọ̀ bụ ịsị onye a ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, ‘A gbagharala gị mmehie gị,’ ka ọ̀ bụ ịsị ya, ‘Bilie, buru ihe i ji edina ala gawa ije’? 10 Ma, ka unu wee mara na Nwa nke mmadụ+ nwere ikike ịgbaghara mmehie n’ụwa—”+ ọ gwara onye ahụ ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, sị: 11 “Ana m asị gị, Bilie, buru àkwà gị lawa n’ụlọ gị.” 12 O wee bilie, buru ihe o ji edina ala ozugbo ma si n’ihu ha niile pụọ. Ihe a juru ha niile anya. Ha tokwara Chineke, sị: “Anyị ahụtụbeghị ụdị ihe a.”+ 13 Ọ gara ọzọ n’akụkụ oké osimiri. Ìgwè mmadụ nọkwa na-abịakwute ya. O wee malite izi ha ihe. 14 Ma mgbe ọ na-agafe, ọ hụrụ Livaị nwa Alfiọs ka ọ nọ ọdụ n’ebe a na-anakọta ụtụ. O wee sị ya: “Bụrụ onye na-eso ụzọ m.” O wee bilie, soro ya.+ 15 Mgbe e mechara, Jizọs gara iri nri n’ụlọ ya. Ọtụtụ ndị ọnaụtụ na ndị mmehie sokwa Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na-eri ihe, n’ihi na ọtụtụ n’ime ha na-esokwa ya.+ 16 Ma mgbe ndị odeakwụkwọ ndị Farisii hụrụ na o so ndị mmehie na ndị ọnaụtụ na-eri ihe, ha malitere ịjụ ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Ọ̀ na-eso ndị ọnaụtụ na ndị mmehie eri ihe?” 17 Mgbe Jizọs nụrụ ya, ọ sịrị ha: “Ndị ahụ́ dị anaghị achọ onye ga-agwọ ha, kama ọ bụ ndị ahụ́ na-adịghị na-achọ ya. Ọ bụghị ndị ezi omume ka m bịara ịkpọ, kama ọ bụ ndị mmehie.”+ 18 Ndị na-eso ụzọ Jọn na ndị Farisii na-ebu ọnụ. N’ihi ya, ụfọdụ ndị bịara jụọ Jizọs, sị: “Gịnị mere ndị na-eso ụzọ Jọn na ndị na-eso ụzọ ndị Farisii ji ebu ọnụ, ma ndị na-eso ụzọ gị anaghị ebu ọnụ?”+ 19 O wee sị ha: “Mgbe nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ+ na ndị enyi ya nọ, ndị enyi ya ekwesịghị ibu ọnụ, ka hà kwesịrị? Ọ bụrụhaala na ha na nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ nọ, ha agaghị ebu ọnụ. 20 Ma oge na-abịa mgbe a ga-akpọpụ nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ n’ebe ha nọ.+ Ha ga-ebuzi ọnụ mgbe ahụ. 21 E nweghị onye na-eji ibé ákwà ọhụrụ adụchi uwe ochie dọkara adọka. Ọ bụrụ na e mee otú ahụ, ibé ákwà ọhụrụ ahụ na-eme ka nke ochie ahụ dọkaa. Ọ na-adọka karịa otú ọ dọkaburu.+ 22 E nweghịkwa onye na-agbanye mmanya ọhụrụ n’ime karama akpụkpọ ochie. Ọ bụrụ na e mee otú ahụ, mmanya ahụ na-agbawa karama akpụkpọ ahụ. Mmanya ahụ na karama akpụkpọ ahụ na-alakwa n’iyi. Kama, a na-agbanye mmanya ọhụrụ n’ime karama akpụkpọ mmanya ọhụrụ.” 23 Mgbe o si n’ubi ọka wit na-agafe n’Ụbọchị Izu Ike, ndị na-eso ụzọ ya malitere ịghọrọ ụyọkọ ọka wit ka ha na-aga.+ 24 Ndị Farisii wee sị ya: “Legodị, gịnị mere ha ji na-eme ihe iwu kwuru ka a ghara ime n’Ụbọchị Izu Ike?” 25 Ma ọ sịrị ha: “Ọ̀ bụ na unu agụtụbeghị ihe Devid mere mgbe ọ na-enweghị ihe oriri, agụụ ana-agụ ya na ndị so ya?+ 26 N’akụkọ banyere Abayata,+ onyeisi nchụàjà, e kwuru na Devid banyere n’ụlọ Chineke taa achịcha a na-enye Chineke, o nyekwara ndị so ya. Ma, iwu kwuru na o nweghị onye kwesịrị ịta ya ma e wezụga ndị nchụàjà.”+ 27 O wee sị ha: Chineke mere Ụbọchị Izu Ike maka ụmụ mmadụ.+ O keghị ụmụ mmadụ maka Ụbọchị Izu Ike. 28 N’ihi ya, Nwa nke mmadụ bụ Onyenwe Ụbọchị Izu Ike.”+